admin – Purple Feminist Group
Written by adminAugust 4, 2020
မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာက နိစ္စဓူဝ ကြားရတဲ့ စကားတွေပါပဲ။ မြန်မာ မိန်းကလေး ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်လောက်ဟာ မြန်မာမိန်းကလေး မလို့ မြန်မာလိုပဲ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ရမယ်၊ အပြောအဆိုဆင်ခြင်ရမယ်၊
Lost in Violence ( Sexual Abuse)
ကျွန်မက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်စံရွာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ မန်စမ်ဟာရာသီဥတု သာယာပြီး လူမျိုးစုများစွာ အတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ချစ်စရာ ရွာလေးတစ်ရွာပါ ကျွန်မအသက် (၇) နှစ်အရွယ်တုန်းက ကျွန်မတို့အိမ်ကို မကြာခဏ ၀င်ထွက်နေကျဖြစ်တဲ့ အသက်ကြီးကြီး အဘိုးအရွယ် အမျိုးတစ်ဦးရှိပါတယ်။
လူဦးရေတစ်ဝက်လောက်က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကို ကိုယ်တို့ဟာ တစ်လတစ်ခါရာသီလာတာကို ဖုန်းကွယ်စရာ လိုလို့လား?
ရာသီလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြီးမာဆုံး လွှမ်းမိုးမှုက မိန်းမတွေကိုယ်တိုင်ပဲလို့ထင်တယ်။ ရာသီလာတဲ့အခါမိသားစုထဲက မိန်းမတွေက သွေးတွေက ရွံစရာ သွေးပုပ်တွေ၊ မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့ပြောကြတယ်။ ငယ်တုန်းကတော့ ယုံတာပေါ့၊ ငါခန္တာကိုယ်ကြီး ညစ်ပတ်ပါလားလို့။
လူ့ဘဝကား ဆန်းကြယ်လှသည်။ ကျား/မ ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို မည်သူက မည်သည့်အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ သို့သော် လုပ်ခဲ့သူသည် လွန်စွာ မျှတသည်။ တွေးတော၍ အတွေးနှောသူများသာ မမျှတပေ။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ “အားနွဲ့သော မိန်းကလေး” ဟူသည့်
မိန်းကလေးအများစုဟာ ရာသီသွေးပေါ်တဲ့ကိစ္စကို Blessing တစ်ခုလို မြင်မယ်မထင်ဘူး။ ကိုယ်ကတော့ မြင်တယ်။ အဲ့လို မြင်တတ်ဖို ခံစားတတ်ဖို့ ကိစ္စကလည်း အတွေ့အကြုံနဲ့တော့ ဆိုင်တာပေါ့။
ရာသီလာလို့ ဆိုင်တွေမှာ ‘ဂွမ်းထုပ်’ (Pad) သွားဝယ်ရင် ကျွပ်ကျွပ်အိပ် အမဲနဲ့ ဒါမှမဟုတ် သတင်းစာနဲ့ ပတ်ပြီး ထည့်ပေးလေ့ရှိတယ်။
နောက်ပြီး ရာသီလာလို့ ထမီမှာသွေးစွန်းသွားရင် ကျောင်းစိမ်းပေါ်မှာ အနီကွပ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ ဟာကနဲ ဟင်ကနဲပဲ။ ရာသီလာတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ‘ငါ့မှာပေနေလား။ ကြည့်ပေးပါဦးလို့’
Why should we celebrate menstruation?
ငယ်ငယ်တုန်းက ဓမ္မတာရာသီလာတာ ရှက်စရာလို့ထင်ဖူးတယ်။ ရာသီသွေးက တကယ်ညစ်ပတ်တယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်။ဒီအချက်အလက်တွေကို မသိခင်တုန်းကပေါ့။
ရာသီသွေးလာတာရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လူအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရာသီသွေးလာတာ ရှက်စရာလို့ မြင်ကြတဲ့ လူတစ်ချို့ ရှိကြသေးတယ်ဗျ။ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဆိုတော့ လူကြီး၊ လူငယ်၊ ကျား၊မ အကုန်ပါတာပေါ့ဗျာ။
နေမဝင်အပြုံး အပိုင်း (၂)
လူသားတွေ ဆုတောင်းဖို့ သွားတဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ ဒီလောက်နာကျင်နေတဲ့အချိန် ဘာလို့ သွားပြိး ဆုတောင်းခွင့်မရကြတာလဲ?
ဘုရားဆိုတာ ဖေးမကယ်တင်ရှင်လို့ ခံယူနေတဲ့အချိန် ဒီမိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ သူတို့ဆီ ခိုလှုံခွင့်မရတာလဲ?